Iflethi entle enegumbi elinye - I-Airbnb
Iflethi entle enegumbi elinye
Souraïde, Aquitaine, France
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPantxika
Kwiinduli zePyrenees, umgama omfutshane ukusuka elwandle naseSpain, le flethi entsha inegumbi elinye ibekwe kumgangatho wokuqala wendlu evaliweyo enegadi kwindawo ezolileyo. Uyakonwabela ukungena kwakho kwabucala kunye nendawo yokupaka.
Kwiinduli zePyrenees, iikhilomitha ezingama-20 ukusuka elwandle: iSt Jean de Luz, iBiarritz, iAnglet…8km kude nomda waseSpain kunye neelali zasebumelwaneni zase-Espelette, Aïnhoa naseSare.
Iflethi entsha enomtsalane enegumbi elinye ebekwe kumgangatho wokuqala wendlu eqhelekileyo yaseBasque enegadi kwindawo ezolileyo. Uyakonwabela ukungena kwakho kwabucala kunye nendawo yokupaka. Indlu ikufuphi nombindi welali kwaye kanye ecaleni kwebala legalufa elinemingxuma eli-18.
23m² / 248ft² igumbi lokuhlala eline:
-Indawo yekhitshi efakwe ngokupheleleyo: Isitovu sokungeniswa, i-oveni yombane, i-oveni yemicrowave, isitya sokuhlamba izitya, iketile, itoasta, umenzi wekofu, umatshini wokuhlamba, iayini.
-Indawo yokuhlala enesofa-ibhedi, iTV, itafile yokutyela
9m² / 97ft² igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini
Igumbi lokuhlambela elineshawa, isinki kunye neWC
Igadi enetafile nezitulo
Ukubona ibala legalufa
4.86 out of 5 stars from 279 reviews
4.86 · Izimvo eziyi-279
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi279
Ikona-ivenkile kumgama omfutshane kakhulu kunye neevenkile ezinkulu ezinkulu kwimizuzu eli-10 yokuhamba.
I-Souraïde inikezela ngeendawo zokutyela ezimbini, iphuli enye yokuqubha, iinkundla zentenetya, inkundla ye-squash, indawo yemidlalo emininzi, ipaki enemidlalo yabantwana, kwaye ngokuqinisekileyo "i-fronton" ukuba ufuna ukuzama isandla sakho kwi "pelote basque".
Umbuki zindwendwe ngu- Pantxika
Ujoyine nge- 2015 Septemba
Ndihlala kumgangatho osezantsi wendlu ukuze ndifumaneke ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo malunga nokuhlala kwakho.
Uya kufumana kwiflethi yakho amanye amaxwebhu malunga nezinto ekufuneka zenziwe kwingingqi yethu
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Souraïde